Umshini Wokusika we-Laser - WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD.
Umshini we-Las2 Laser
Umshini we-Laser wangokwezifiso
Umshini we-Textile Laser
Umshini wesikhumba weLaser
Ishidi ne-Tube Laser Cutter
Indwangu Yokuhlakazeka Komoya
Indwangu Yokuphrinta Engaphansi
Ezemidlalo Nezingubo Ezisebenzayo
Imishini ephezulu ye-CO2 laser yokusika, yokuqopha nokumaka izinto ezingezensimbi.
I-Mars Series Laser Cutter
Umshini weLaser Wezingubo
Umshini weLaser wesikhumba
Umshini wokusika i-fibre laser uyithuluzi elingabizi, elisebenziseka kalula, futhi elisebenza ngezintambo ezingakusiza ekuqaliseni umsebenzi omusha wokuqalisa noma ukwandisa inzuzo yenkampani yakho eyenziwe kahle. Kakhulu faka ishidi lensimbi ne-tube.
Umshini Wokusika Ishidi ne-Tube Laser
Umshini wokusika we-Robot Laser
Isicelo se-Las2 se-Laser soMkhakha Ongeyona Insimbi
Isigqoko esisebenzayo & Izingubo zezemidlalo
Izithuthi & Izindiza
Isicelo seFibre Laser yoMkhakha Wensimbi
IGolden Laser izimisele ukuhlinzeka ngezixazululo zesicelo se-laser ezidijithali, ezenzakalelayo nezisebenzayo
ukusiza amasistimu wokukhiqiza wendabuko wokukhulisa ukuthuthukisa futhi athuthukise kahle.
I-GOLDEN LASER ingumkhiqizi oholayo wemishini ye-laser emhlabeni wonke ngokuthuthukisa imikhiqizo yethu nangokusebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukile.
> Thola imishini yethu ye-laser
UKWAKHA IBANDLA LAKHO
I-GOLDEN LASER ikunikeza imishini ye-laser ebanga lokuqala enenhloso eyodwa yokwenza inzuzo enkulu. Izisombululo zethu ze-laser zikusiza ukukhulisa umkhiqizo kanye nenani elingeziwe lemikhiqizo yakho.
> Thola sitshelwa se-laser
IGOLDEN LASER isungule inethiwekhi yokuthengisa esezingeni lokuvuthwa emazweni angaphezu kwezi-100 nezifunda emhlabeni jikelele.
> Funda kabanzi mayelana ne-GOLDEN LASER
Onjiniyela abatholakala kwimishini yokusebenza.
Ukuxhaswa kwe-Intanethi nevidiyo.
Ukufakwa Kwensimu, ukuthuma nokuqeqesha.
Ukulungiswa kwensimu nokulungiswa.
> Funda kabanzi ngokuxhaswa kwensiza
Izindaba & Ibhulogi
CO2 Umshini wokusika we-Laser